China L-Cystine mpanamboatra sy mpamatsy | Haisiana
Pls mitsidika ny tranonkalantsika ofisialy amin'ny fipihana: Jirong Pharmaceutical Co., Ltd. Haitian Amino Acid Co., Ltd.
Asidra amine amino
L-asidra glutamika HCL
CAS No. .: 56-89-3
Fenitra: AJI, USP, ao an-trano
Function and application: Ampiasaina amin'ny fikarohana biokimika izy io, fanafody ho an'ny alopecia isan-karazany, fanamoriana sakafo, sns
Fonosana: 25kg / kitapo (amponga), hafa raha ilaina
Fiainana talantalana: roa taona
Vovo-jiro kristaly na vovoka kristaly
Vy mavesatra (Pb)
Residue amin'ny ignition
Function sy fampiharana:
Ny L-Cystine dia tsy tokony hafangaro amin'ny cysteine, izay nivoahany. Ny cystine dia endrika malemy azon'ny oxidized an'ny asidra amine, cysteine, izay fahita matetika amin'ny sakafo maro toy ny atody, hena, vokatra vita amin'ny ronono ary voamaina manontolo.
Ny L-Cystine dia mino fa mitana anjara toerana amin'ny synthesie proteinina, manohana ny fo, ny fahasalaman'ny fo sy ny fo ary ny havokavoka. Mety ho izany koa fahatsiarovana fanampiana, fifantohana ary fandraisana anjara amin'ny fahatsapana fiadan-tsaina. Ho fanampin'izany, ny Cystine dia mety hanampy amin'ny volo salama.
Manohana ny fo
Soa azo avy amin'ny fahasalaman'ny kardia
Mampiroborobo ny havokavoka salama
Fahatsiarovana sy fiheverana fanampiana
Mandray anjara amin'ny fahatsapana fitoniana milamina
Miasa hampiroborobo ny volo salama
Ampiasaina indrindra amin'ny fikarohana biokimika izy io, ny fanafody ho an'ny alopecia isan-karazany, ny tsiranoka amin'ny sakafo, sns
Ho an'ny fikarohana biokimika. Voaomana ny fitaovana biolojika. Izy io dia ampiasaina amin'ny fikarohana biokimia sy sakafo. Izy io dia afaka mampiroborobo ny asan'ny okidratika sy ny fihenan'ny sela amin'ny vatana, mampitombo ny sela fotsy ary misoroka ny fivoaran'ny bakteria pathogenika
Ampiasaina amin'ny alopecia isan-karazany izy io. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fivalanana, typhoid, gripa ary aretina mitapoka mahery vaika, asma, neuralgia, eczema ary aretina manapoizina isan-karazany, ary manana ny anjara asan'ny fihazonana proteinina. Izy io koa dia ampiasaina ho fanamorana sakafo.
Reagent biokimika ho an'ny fanomanana medium biolojika. Izy io koa dia singa manan-danja amin'ny fampidirana asidra amino sy ny fanomanana asidra amine.
Mahasoa amin'ny fivelarana biby, mampitombo ny lanjan'ny vatana, ny atin'ny aty sy ny voa ary manatsara ny kalitaon'ny volony,
Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny additive kosmetika hampiroborobo ny fanasitranana ny ratra, hisorohana ny allergy amin'ny hoditra ary hitsaboana eczema.